Toriteny Mana anio | Mana isan andro
Toriteny Mana anio
LIOKA 16.1-15 F. 3
Ampamoaka (1-8). Tsy misy takona izay tsy ho hita. Napetrak’Andriamanitra eto isika hitantana sy hitandrina izay rehetra nomeny amin’ny maha-olona feno antsika. Misy hifandraisany ny fitantanana ety an-tany sy any an-danitra. Tsy ny tsy fahamarinan’ilay mpitantana tsy mahatoky no deraina eto fa ny fahamalinany sy ny fahazaina mitsinjo ny ho avy!
Fahaizana mitantana (9-15). Ny tsy fahamarinana, ny fitiavam-bola tafahoatra sy ny fanararaotam-pahefana dia mifandray amin’ny fanangonana sy fampiasana harena tsy marina. Ny harena dia natao hampiasaina tsy amim-pahihirana fa amim-pahendrena hampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra sy hanampiana ny hafa. Ny fitantanana mangarahara sy marina no tokony hita ao amin’ny tsirairay avy. Raha tsy mahatoky isika amin’ny fananana eto an-tany, ahoana no fomba hampitantanan’Andriamanitra antsika ny harena tena izy any an-danitra? (1 Tim.3.1-3). Ho an’ireo jiosy tamin’izany fotoana izany, ny harena dia fitahiana sy mari-pankasitrahana avy amin’ Andriamanitra (Ohab.10.15). Koa naneso an’i Jesoa izy ireo, nihevitra Azy ho malahelo, ary tsy nankasitrahan’Andriamanitra. Mampifandray ny fitiavam-bola sy ny fikatsahana harena amin’ny fanompoan-tsampy ny Baiboly. Andriamanitra izay mandinika ny fo sy ny voa dia mahita izay hiankinan’ny fonao marina (15).
Fampieritreretana: Hevero fa mptitantana izay noraisinao avy amin’Andriamanitra ianao: tsy ny vola aman-karena ihany fa ny fahaizana, fahalalana, fahefana, vady, zanaka, asa, mpanampy, tany, trano, asa fanompoana, sns… Ahoana ny fomba nitantanao izany ? (Gen.2.15). Fotoana mety izao hibebahana ka handehanana amin’ny fahitsiana sy fahamarinana.eo ambanin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina.
1 Jaona 4.16 : « Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin’ny fitiavana no mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. »
Eo am-piadiana tanteraka amin’ny Covid andro vitsivitsy izay, nifoha aho indray maraina niaraka tamin’io fisaintsainana izay nanazava ny fanahiko io. Mampahery tokoa ny mahita ny fomba fitsinjovan’ny Tompo an’ireo Zanany, amin’ny alalan’ny fanehoany ny maha Izy Azy amin’izy ireo. Tsy aritro ny tsy hanoratra aminareo, mba hahazoanareo fampaherezana ihany koa.
Matetika isika dia tsy mahazo an-tsaina mazava tsara ary tsy mandalina tsara ny votoatin’ny tenin’Andriamanitra iray izay faran’ny tsotra indrindra. Raha ny mahakasika ny fitiavana, dia tsy vitan’ny maneho izany fotsiny ihany ny Andriamanintsika, fa Izy tenany mihitsy no fitiavana. Ny fitiavan’Andriamanitra dia nampiova tanteraka ny fiainako ary ny foko dia narehitry ny Afony malefaka, nandritry ny volana maromaro ary tamin’ny fomba tsy hay lazaina. Azoko antoka tanteraka fa ny fitiavana no nanetsika voalohany ny fiovam-poko. Fitiavana be dia be teo anatrehana fahotana maro sy tsy fahamendrehana maro !
Amin’ny fomba ahoana moa no hahafahako hanohitra an’ilay Mpamonjy ahy ?
Raha azo heverina ary ny fiainana zavatra toy izany ety ambonin’ny tany, hanao ahoana rehefa hahita Azy mivantana mihitsy isika, ary izay rehetra ambaran’ny Teniny momba Azy dia ho eo avokoa, tanteraka eo ambany masontsika ? Heveriko fa ny fisehoan’ny Tenany mivantana dia hanambara amintsika ny Natiorany amin’ny maha fitiavana Azy, ao anatin’ny Fahatanterahany. Ka ny tsy fitiavana rehetra mety ho tsapantsika ho an’ny tenantsika, ireo fihetseham-po ratsy izay mitondra fanamelohan-tena, dia ho levon’ny Fitiavany avokoa. Ka dia ho raisina ho tahakan’ny zanaka-lahy sy zanaka-vavy ao amin’ny voninahitry ny ray isika, araka ny ambaran’i Paoly ao amin’ny 2 Korintiana 6.17-18. Tsy misy zavatry ny lasa intsony ka hiverina indray eo anivon’ny fiombonantsika Aminy, dia hiaina feno ny fisiana maharitr’zany fitiavana izany isika tsirairay avy. Tena fotoam-boninahitra izay ho avy tsy ho ela tokoa izany !
Hevero izao zavatra izao : Andriamanitra dia fitiavana; ary izay rehetra izay Izy no niandohany, toy ny Zavaboariny na ny asam-panavotana sy izay rehetra Havelany hitranga eo amintsika, toy ny Fitahiany sy ny Famaizany na ireo Fikasany mandrakizay ihany koa; izany rehetra izany dia vokatry ny fitiavana avokoa, izay manentana ny Tenan’Andriamanitra. I Paoly dia manome antoka antsika amin’ny filazany amintsika fa izay rehetra miseho eo amin’ny fiainantsika na inona na inona, dia mitoetra mahatoky hatrany amintsika ilay Andriamanitra fitiavana. Toy izao ny teniny izay tena mampahery tokoa :
Romana 8.37-39 : « Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona na inona amin’izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika ». Tsy lazaina intsony ilay andininy malaza izay voasoratra etsy ambonimbony kely izay milaza hoe : « Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. » Romana 8.28. Fa indrindrindrindra, tandremo mba tsy hanampy ao anatin’ny ny lisitr’i Paoly, ny finiavana hanota tsy misy fibebahana, ny fihemorana amin’ny finoana, ny fandàvana an’ny Tompo, zavatra izay mety hampisaraka antsika tanteraka amin’ny fitiavan’Andriamanitra.
Araka izany Andriamanitra dia fitiavana fa tsy fitsarana sy fanamelohana akory. Miseho izany rehefa ilaina ny fampitsaharana ny asa ataon’ilay ratsy izay mitady hanimba ny zavaboariny sy ny Vahoakany. Rehefa montsana tanteraka ny ota, dia nahavita ny asany tanteraka izay ny fahamarinan’Andriamanitra. Noho izany, ny tena natioran’Andriamanitra sy ny maha izy azy no hiseho amin’ireo zanak’Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia ho fitiavana avokoa, izay hiseho amin’ny endrika faran’izay tsara ka hilana tena nomem-boninahitra mihitsy hahafahana hahazaka azy.
Araka izany, dia aoka isika hijoro amin’izay zava-mitranga rehetra ! Ny Romana 8.18 no handravonako ny tiako ambara : « Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika. »
ANDEFASO MANA AHO
Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.
"remets tout entre ses mains"
CTMI International,Peter MACKENZIE
CTMI International,Lindsay LAJEUNESSE
CTMI Madagascar,P. Mansour